फोरजी सेवा प्रयोगको लागि ग्राहकलाई फोरजी सिम, फोरजी सपोर्ट गर्ने मोवाइल र फोरजी नेटवर्क कभरेज भएको ठाउँ हुनुपर्दछ । ग्राहकले आफुले प्रयोग गरेको सिम कार्ड फोरजी सिम हो कि होईन भनेर *३२४# डायल गरी वा अंग्रेजीमा अक्षर ठुलो ‘क्यिू’ लेखि ३२४ मा एसएमएस पठाई स्टेटस् थाहा पाउन सक्छन् ।
Ncell को ७ दिनको लागी रु. २५.५४ मै ३५००MB फेसबुक डाटा प्याक: कसरी किन्ने ?
भायनेट नेपाल टेलिकम ब्रोडलिङ्क वर्ल्डलिङ्क क्लासिक टेक डीसहोम वेबसर्फर सुबिसु एनसेल